အဘယ်ကြောင့်အဆိုပါ E-စကိတ်စီးဒီတော့ Sizzling ပြီးတော့ကိုသင်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အမူထူးခြားတဲ့နေဟုသောအခါ IOS ကိုသကဲ့သို့ထင်ရှား၏တူညီသောအမျိုးအစားပြီးသားဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ်, လုံးဝဟုတ်မှန်ပါပဲ။ ဤရွေ့ကားလက်အခမဲ့ လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်စကိတ်စီးနေတဲ့သန်းနေရာများမှယူနိုင်ပါတယ်, ကသင်သည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်ဘယ်အရာကိုအရေးမထားဘူး။ Koowheel နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း လျှပ်စစ်စကိတ် Kooboard: ဒါကလူငယ်များတစ်ချိန်တည်းမှာပျော်စရာနှင့်အသွားအပြန်ရှိသည်ဖို့အဘို့ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကစကိတ်စီး၏ပျော်စရာယူ, တစ်မော်တာ Scooter အဖြစ်အသုံးပြုမှုအောင်ပြုလုပ်အဖြစ်လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ် swag တစ်ခုအပိုနည်းနည်းပေးသောအပြီး။ လျှပ်စစ်စကိတ်စီးပျော်စရာနှင့်အတူကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်အများအပြားငယ်ရွယ်လူမျိုး၏ဝါသနာဖြစ်လာသည်။ လျှပ်စစ်စကိတ်စီးတရုတ်နိုင်ငံတွင် Koowheel အမှတ်တံဆိပ်ကနေဒီဇိုင်းနှင့်အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့အကြောင်း, ပြောလိုက်ပါတယ် စကိတ်စီး နေတဲ့ခရီးသွား tool ကိုမသာခဲ့ပေမယ့်လည်းအချို့သောလမ်းအတွက်တစ်စုံတစ်ဦး၏ဘဝအရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ဒါဟာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်တစ်ဦးချောမွေ့ခရီးစဉ်ကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျမွနျမွနျ, တယောက်ကိုတယောက်အရပ်မှသင်တို့ကိုယူနိုင်တဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပုဂ္ဂလိက mode ကိုများအတွက်မြျှောအပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်စားသုံးသူဖက်ရှင်တွေအဘို့အရွေးချယ်ရပါမည်။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင့်ဆင့်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကုန်တင်ကားရှားပါးထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်ယာဉ်ရပ်နားမှုအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးယာဉ်များထက် ကျော်လွန်. မရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်တစ်ဦးချင်းစီ, မူလတန်းအချိန်များအတွက်, Self-ဟန်ချက်ညီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလောကီသားတို့သည်အမှဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။
Koowheel စကိတ် ထွက်အဲဒီမှာ smoothest ခရီးဖြင့်သင်တို့ကိုပေးအပ်စဉ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏။ စကိတ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်အများအပြားအာရှနိုင်ငံများပြီးသားလွန်ကဲကဲသာလွန် Electro-mobility ခဲ့ရပြီးတစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်တလျှောက်လုံးကျနော်တို့လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ပျဉ်ပြားကိုပဲနှင့်သဘောပေါက်! ဤရွေ့ကားဘက်ထရီမမှန်ကန်ကြောင်းဗို့သို့မဟုတ်ချွတ်ယွင်းဆဲလ်အသုံးချဖို့ခဲ့ပြီးအများအပြားမောက်စ်တင်ပျဉ်ပြားအားသွင်းသို့မဟုတ်စီးနင်းသော်လည်းမီးဖမ်းမိ။ သို့သော်ယခုနှစ်အပူဆုံးအားလပ်ရက်ဆုလာဘ်မီးပေါ်မှာဖမ်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ပါတယ်သောသူတို့အား- ပတ်သက်. strangest အချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျသစ်ကိုကုန်တင် Scooter ကိုကြည့်အခါတိုင်းသင်သတိထားမိမှာအလွန်ပထမဦးဆုံးအရာစက်၏သင်တန်းအတွက်အမှန်တကယ်တစ်ခုမရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကွာဟမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Koowheel တရုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း hoverboard အများအပြားအမျိုးမျိုးဆွဲရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းညှိ Scooter ကိုဖန်ဆင်းသည်။
အချိန် post: အောက်တိုဘာ-19-2017